Torohevitra amin'ny fandrafetana ny fandaharam-potoan'ny famoahana YouTube anao - YTpals
YouTube dia nipoitra ho fitaovana mampidi-bola amin'ny famoahana sy fitadiavam-bola amin'ny votoaty marobe. Ny mpamorona votoaty dia nandray ny sehatra media sosialy ho toy ny fitaovam-pifandraisana mahery vaika. Ny fampandehanana fantsona YouTube anefa dia tsy asa kely. Ny YouTubers dia tsy maintsy mamoaka votoaty tsy tapaka mba hisarihana sy hitazonana mpanjifa ary hijanona ho manan-danja. Manjary tsy maintsy atao ny fandrindrana ny fizotran'ny famoahana votoaty.
Ho an'ny paikadin'ny votoaty YouTube matanjaka dia tsy maintsy mamaritra fandaharam-potoana famoahana ianao. Ireo mpampiasa YouTube dia mitady votoaty mahazatra, noho izany ny fifikirana amin'ny fandaharam-potoana dia hitondra fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny fantsonao. Ny fahafahanao Mpanjifa YouTube manantena ny sanda amin'ny fotoana ampiasany vola amin'ny fantsonao. Amin'ny lafiny rehetra, azonao atao mividy mpanjifa YouTube ary hanatsara ny fantsonao, fa tsy maintsy miasa mafy ihany koa ianao mba hitazonana ireo mpanjifanao organika. Ny tsy fitovian-kevitra dia handiso fanantenana ny mpanjifanao ary hahatonga azy ireo ho very liana.
Farito ny matetika
Arakaraka ny maha-matetika sy tsy miovaova ny fandefasanao, dia betsaka kokoa ny isan'ny tiana sy fijerena YouTube maimaim-poana azonao. Ataovy ao an-tsaina, azonao atao koa mividy tia YouTube avy amin'ny YTpals.com. Na izany na tsy izany, tokony hanana hevitra mazava ianao momba ny impiry tianao hamoahana votoaty sy hifaneraserana amin'ny mpihaino anao. Vantany vao nanapa-kevitra ny amin'ny fahamaroan'ny fampiakarana ianao dia tongava amin'ny andro manokana izay mety indrindra amin'ny famoahana votoaty vaovao mifototra amin'ny safidinao sy ny fahafaha-manaonao. Tokony hojerenao koa ny fahafahan'ny mpijery. Ohatra, mety ho mavitrika kokoa ny mpampiasa amin'ny faran'ny herinandro sy ny andro fety.
Manapaha hevitra ny fotoana tsara indrindra
Tsara ny manamboatra ny fotoana mety indrindra amin'ny famoahana ny horonan-tsaryo. Ny fotoana tsara indrindra dia mety miankina amin'ny fahafaha-manaonao na amin'ny fanadihadiana YouTube. Tombanana ny ora be indrindra hijerena araka ny mpihaino kendrenao. Ataovy azo antoka fa mandefa ny atiny ianao ora vitsivitsy alohan'ny fotoana voatondro mba hahafahan'ny YouTube manisy anarana ny entanao sy mameno ny valin'ny fikarohana.
Miresaha amin'ny mpihaino anao
Ampahafantarin'ny mpijery anao ny fandaharam-potoan'ny famoahanao amin'ny alàlan'ny boaty fanoritsoritana eo ambanin'ny horonan-tsary tsirairay, na avereno averina ny fandaharam-potoananao isaky ny horonan-tsary. Ampiasao ny YouTube Live mba hifandraisanao bebe kokoa amin'ny mpihaino anao sy hanitarana ny tanjonao.
Havaozy ny kalandrie votoaty
Mamorona sy manavao ny kalandrie votoaty amin'ny fampiasana planner na môdely. Soraty ao amin'ny kalandrienao ny daty sy hetsika manan-danja rehetra tianao hokendry ary manomana mialoha ny atiny. Raha te hamorona horonan-tsary ho an'ny Andron'ny Vehivavy ianao dia tsy maintsy manamarika ny daty ao amin'ny kalandrie ary manapa-kevitra amin'ny atiny mety indrindra.
Safidio ny atiny hampakarana
Mitondrà lohahevitra mahaliana ho an'ny mpihaino kendrenao. Satria mikasa ny hamorona votoaty tsy tapaka ianao dia ilaina ny lohahevitra sy lohahevitra maromaro ho an'ny horonantsary YouTube. Azonao atao ny mampiasa metrika YouTube hamantarana hoe iza amin'ireo horonantsary no lanin'ny mpijery maro kokoa. Azonao atao ihany koa ny manatona ny mpanjifanao ary manao fitsapan-kevitra hanapa-kevitra momba izay tian'ny ankamaroan'ny olona hojerena. Arakaraka ny avoakan'ny ora fiambenana no haingana kokoa azonao atao ny mamatsy vola ny fantsonao. Manoro hevitra anao izahay hividy ny fijerena YouTube sy mividy ora fijerevana YouTube hanombohana raha tsy afaka mamorona YouTube maimaim-poana ianao.
Alaharo ireo lahatsoratrao
Mamorona mialoha ny horonan-tsarinao YouTube ary mandamina azy ireo amin'ny daty sy ora voatondro. Ampidiro mialoha ny horonan-tsary ary sao misy diso. Ny fandefasana mialoha dia ahafahanao miasa ara-dalàna, ahafahanao mamoaka ny hafatrao amin'ny fotoana mety indrindra ary mijanona ho tsy misy adin-tsaina. Ny fandrindrana ny horonan-tsarinao dia hamonjy fotoana anao ary hamela anao hifantoka amin'ny famoronana votoaty vaovao ho an'ny fampiakarana ho avy.
Amporisiho ny horonan-tsary ho avy
Ny kalandrie votoatyo dia tsy maintsy mampiditra drafitra hampiroboroboana ny atiny atolotrao hampiakarina amin'ny ho avy. Afaka mamorona ianao ary manome famaritana am-bava na sombintsombin'ny horonan-tsary ho avy amin'ny alàlan'ny horonan-tsarinao YouTube. Azonao atao koa ny mampiasa sehatra media sosialy hafa, toy ny Instagram sy Twitter mba hampiroboroboana ny horonan-tsary YouTube ho avy.
Ny fandrindrana ny fandaharam-potoan'ny famoahanao YouTube dia dingana lehibe amin'ny fampitomboana ny fantsona YouTube anao. Raha mbola tsy azonao antoka ny fomba hanangonana olona tia sy mpanjifa bebe kokoa amin'ny YouTube dia afaka manavotra anao ny orinasa toa an'i YTpals. Manana ny fahaizana mampianatra anao izy ireo ary manampy amin'ny fanatsarana ny firotsahanao amin'ny YouTube. Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'izy ireo dia afaka mividy tian'ny YouTube ianao ary na dia mividy anjara YouTube koa. Ireo dia hanampy amin'ny fampitomboana ny laharanao amin'ny algorithm YouTube. Raha ianao mividy hevitra YouTube, hampitombo ny fahatokisan'ny horonan-tsaryo izany.
Soso-kevitra amin'ny fandrafetana ny fandaharam-potoananao amin'ny famoahana YouTube avy amin'i YTpals Writers, 5 May 2022
Relevancy + Personalization = Fahombiazana ao amin'ny YouTube Ny fiatrehana ny algorithm YouTube mavitrika sy henjana dia tsy sakafo ho an'ny mpivarotra. YouTube, izay manana mpampiasa mihoatra ny 2 lavitrisa, no faharoa lehibe indrindra…
Hafiriana no tokony ho faharetan'ny horonantsarinao YouTube?
Mety ho asa lehibe ny famaritana ny halavan'ny YouTube mety indrindra amin'ny horonan-tsarinao. Raha te hahalala izay mety aminao indrindra, dia mila manazava aloha ny karazana mpamorona ianao ary inona ny fampahalalana…
Ahoana ny fomba ahazoana mametraka ny horonan-tsarinao amin'ny YouTube?
YouTube dia fitaovana marketing matanjaka izay ilain'ny orinasa tsirairay. Sehatra iray izy io izay mety indrindra hivarotana orinasa. Orinasa maro no manana kaonty YouTube anaefasana horonantsary, fa ny marketing amin'ny horonantsary dia…